Kuongororwa kweakanakisa uye mashoma eRinux kugoverwa. | Linux Vakapindwa muropa
Kwemamwe makore ikozvino, masosi akaitwa pane iyo Zvakanakisa kugoverwa kweLinux yegore. Ivo anowanzoitwa nezvikamu, nekuti zvingave zvisina kunaka kungoita runyorwa. Kugoverwa kwega kwega kune chiyero chekuita uye nekudaro isu tinofanirwa kuziva kuti tingavagovanisa sei. Pano iwe uchaona iwo runyorwa rweakanyanya kugoverwa egore rino akapatsanurwa zvinoenderana nechikamu chavari ivo:
ari kugoverwa kwedesktop aya ndiwo akagadzirirwa madesktop makomputa. Iyo yakanakisa pasina kupokana ndiUbuntu, inoteverwa pamwe naFedora uye Linux Mint.
Kugoverwa yakakosha pamalaptop.
Isu tinoenderera ne kambani distros, umo Red Hat Enterprise Linux (RHEL) inomira uye pazvitsitsinho zvaro tine SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED).
Mukati mezvipo nekukoshesa kutarisisa pa maseva ekambani, tenzi RHEL uye SuSE Linux Enterprise Server (SLES).
Kana izvo zvatinoda iri a chengetedzo domain Chekutanga pane zvese, isu tinogona kutarisira kugovera izvo zvine chengetedzo-yakatarisana nekusimudzira yekusimudzira. Pakati pavo tinoratidzira Backtrack uye Bhokisi rekumashure, kunyangwe paine vamwe vakwikwidzi vakaita saLightweight Portable Security.
Kune rimwe divi, kana yedu iri iyo multimedia nyika, isu tichafanirwa kuongorora nharaunda senge ArchLinux ine zviuru zvemapakeji esoftware. ZevenOS ichave imwe inonakidza sarudzo, kunyange isiri zvakanyanya.
Kune vakawanda vanobheja, isu zvakare tine yakakosha yekugovera nezvakanaka zvirimo mu videogames. Kubvira nyika yevaraidzo yedhijitari yatendeuka kubva kukodhi yemahwindo yeWindows kusvika ichipfira kumeso kwayo nenhau dzichangoburwa nezvayo, Linux inoita kunge yakanaka chikuva chemitambo izvozvi. Mundima iyi, ruzivo rweUbuntu runomira.
Uye ini ndinowedzera ichi chikamu, nekuti ndinofunga chinonakidza kwazvo munguva dzino. Izvo zvese nezve masystem yemafoni nhare (mafoni, mapiritsi, nezvimwewo) zvichibva paLinux. Pakati peizvi ini ndaizoratidzira Android pamusoro pezvose, pamusoro pekutaura mamwe anga achirira zvakanyanya munguva pfupi yapfuura seTizen neFirefox OS.
Sezvo tiri pano, wadii wataura nezve zvakawandisa zvakagoverwa ivhu redu ("vapfuri"), Izvo zvisina vanhu vazhinji vanoziva. Pakati penyika dzatinogona kusimbisa Trisquel (Galicia), Guadalinex (Andalusia), GNULinex (Extremadura), Asturix (Asturias), Lliurex (Valencia), MoLinux (Castilla La Mancha), MAX (Madrid) uye Linkat (Catalonia). Asi pane zvimwe: GALPonMiniNo, ASLinux, melinux, Wifislax, Zentyal, Càtix, kademar, Molinux Zero, nezvimwe.
Pakupedzisira uye nekuwedzera katsamba kekuseka, ndinodawo kuwedzera KUNYANYA KUKOSHA LINUX ZVIPARADZO. Zvishoma zvinotaurwa nezvavo, asi zvitongere wega: Hanna Montana Linux, Ubuntu SatanicEdition, Ubuntu Christian Edition kana Ubuntu ME, Helal Linux, Jewbuntu, ... muchidimbu, pasina kutaura.
Uye ndeupi waunoda? Pakupera kwezuva inyaya yekuravira, zvishoma zvakakosha kuita chinzvimbo kana mumwe nemumwe wedu aine maonero ake uye isu tatova "murudo" nechero ipi yeiyi distros. Asi zvinogona kuve zvinonakidza kune avo "vanobva kunze kwenyika" uye vasati vaedza Linux izvozvi.
Mamwe mashoko - Backbox 3.01 Linux yevavhavha, Guadalinex v9 yakanyanya Andalusian Linux mukuvandudza, Trisquel 6.0 yakagadzirira iwe
Kunobva - linux.com
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Iyo yakanakisa uye isinganetsi Linux distros ya2013
Nezve zvinoshanduka, zvakagadzikana uye zvine mutsindo, ini ndinosarudza Ubuntu mune yayo 12.04.2 LTS vhezheni, ini ndaedza yakajairwa vhezheni asi haina kugadzikana kwazvo kuravira kwangu, Mint 13 mune yayo xfce vhezheni yakareruka uye yakakwana kwazvo, Debian 6 yemaseva ndeye zvakare yakagadzikana uye ine simba, Manjaro 0.84 yave Arch yeUbuntu uyezve kune desktop yangu ndakaedza Ubuntu Gnome uye Pear OS 7.
Zvingave zvinonakidza zvakare: yakanakisa gnome, yakanakisa kde.
hanna montanna linux XDDDDDDDD
Pindura kuna marrana
Ndichitarisa, ini ndawana inotevera distro «kuzviuraya linux», asi hazvikurudzirwe kune newbies sezvakaita vazhinji vedu, nekuti yakachena kushandisa kuburikidza neconsole uye iwe wakanganisa, iwe bvisa zvese, ndiko kuti, iwe bvisa iyo OS nezvose zvainazvo, zvimwe pamwe: Kuzviuraya Linux
Ini ndaizodaidza iyo yekupedzisira bvunzo kune iyo programmer
Zvakanakisa zvandakaedza "DMDc", zvichibva paDebian. Inoenda sepfuti, heino chinongedzo kana iwe uchida kuedza http://frannoe.blogspot.com.es/2013/06/ya-esta-aqui-dmdc-10-il.html.
Ndanga ndiine LMintDebian kwemakore asi iyi inoipfuura.
Ubuntu ... zvirinani tisingataure, chestnut (kunze kwekutengesa kwe software yemahara).
BluexLaU RedxRedHat akadaro
Kune maseva ini ndinoshandisa Centos inoshanda kwazvo, kune desktop ini ndinoda Fedora.
Pindura kuna AzulxLaU RojoxRedHat
Kurudziro yangu ndeiyi:
(1) Yevatangi vekutanga ini ndinofunga zvingave zvirinani: kuvhuraSUSE, Fedora kana ubuntu.
(2) Nounyanzvi hushoma: Slackware kana Debian.
(3) Uye neruzivo rwakakura: archLinux kana Gentoo (wandinofarira).
CHENJERWA neBackTrack 5 iyo ine SELinux pre-yakaiswa.
Pindura kuna akwx937
Ini ndinoshandisa puppy linux: D (pane pendrive)
Pindura kuna juan95
Justin Bieber Linux - http://biebian.sourceforge.net/ xDD
Machux, iyo Linux yeMachops